မသိသေးတဲ့အတိုင်း (As if you didn’t already know! by Guy Perring) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on February 3, 2011 at 13:19 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
He looks as if/though he hasn’t slept all night. (သူ့ပုံစံက တစ်ညလုံး မအိပ်ရတဲ့အတိုင်းဘဲ) (သူ၏ အသွင်သဏ္ဍာန်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ထင်မြင်ယူဆရချက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသည့် အသွင်ရှိသည်။)
It feels as if/though summer’s on the way. (နွေရာသီရောက်တော့မယ့်အတိုင်းဘဲ ခံစားရတယ်) (ပူနွေးသောလေ၊ နေသာသော ကောင်းကင်တို့ကို ကြည့်၍ ယင်းသို့ ထင်မြင်ယူဆရခြင်းဖြစ်သည်။)
It sounds as if/though they’ve arrived. (အသံနားထောင်ကြည့်ရတာ သူတို့ ရောက်လာတဲ့အတိုင်းဘဲ) (ကားတစ်စင်း ထိုးဆိုက်သည့်အသံ၊ တံခါးများ ပွင့်လာသည့်အသံ၊ ပြင်ပတွင် လူများ စကားပြောဆိုနေကြသည့် အသံများကို ကြားရသဖြင့် ယင်းသို့ ထင်မြင်ယူဆရခြင်းဖြစ်သည်။)
She behaves as if/though she were the Queen. (ဘုရင်မကြီးပုံစံဖမ်းနေတယ်) (ဘုရင်မကြီးမဟုတ်သည်မှာ သိသာထင်ရှားပါသည်။)
He walks as if/though he were an old man. (အဖိုးကြီးလို လမ်းလျှောက်တယ်) (တကယ်တော့ အသက်မကြီးသေးပါ။)
They talk as if/though the world were coming to an end. (ကမ္ဘာပျက်တော့မည့်အလား ပြောဆိုနေကြသည်) (ကမ္ဘာကြီး အဘယ်မှာ ပျက်ဦးမည်နည်း။)
He looks as if/though he’s sick. (နေမကောင်းတဲ့ပုံဘဲ) (နေမကောင်းပါ)
He talks as if/though he were sick. (နေမကောင်းတဲ့ပုံနဲ့ စကားပြောတယ်) (တကယ်တော့ နေမကောင်းတာ မဟုတ်ပါ။)
He looks like he hasn’t slept all night. (သူ့ပုံစံက တစ်ညလုံး မအိပ်ရတဲ့အတိုင်းဘဲ)
It feels like summer’s on the way. (နွေရာသီရောက်တော့မယ့်အတိုင်းဘဲ ခံစားရတယ်)
It sounds like they’ve arrived. (အသံနားထောင်ကြည့်ရတာ သူတို့ ရောက်လာတဲ့အတိုင်းဘဲ)
အထက်ပါ ဆောင်းပါးအားကူးယူ၍ အခြား website နှင့် blog များတွင် တင်မည်ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/as-if-you-didnt-already-know မှကူးယူကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန်။
Permalink Reply by moeaye on February 4, 2011 at 5:04
Permalink Reply by Thinn Thiri on February 4, 2011 at 7:22
Permalink Reply by Mg Kyaw Tint on February 4, 2011 at 9:20
Myanmar Network ................. Thankalot. I am going to wait to read the next lessons of Myanmar Network. Reading this lesson improve my English skill.
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on February 4, 2011 at 9:33
Permalink Reply by Zaw Ye Tun on February 4, 2011 at 10:05
Permalink Reply by 1xu4bgnd0hm20 on February 5, 2011 at 9:36
it is useful... Thanks
Permalink Reply by Sandar on February 12, 2011 at 12:22
Permalink Reply by Aung Bo Bo on February 13, 2011 at 16:53
Permalink Reply by 0jjjqjzgsuhiy on February 20, 2011 at 21:27
Permalink Reply by Peaceangel on February 25, 2011 at 5:30
Permalink Reply by khin on March 8, 2011 at 17:53
Permalink Reply by 1wowv3pr4xx97 on March 9, 2011 at 5:39
(င) (စ) မှာထပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ...